झुटो प्रेमले लियो अस्मिताको ज्यान, अ’नैतिक सम्बन्ध गासिसके पछी जब प्रेमीको त्यो सत्य थाहा पाउदा ……. – My Blog
झुटो प्रेमले लियो अस्मिताको ज्यान, अ’नैतिक सम्बन्ध गासिसके पछी जब प्रेमीको त्यो सत्य थाहा पाउदा …….
No Comments on झुटो प्रेमले लियो अस्मिताको ज्यान, अ’नैतिक सम्बन्ध गासिसके पछी जब प्रेमीको त्यो सत्य थाहा पाउदा …….
नारायण नगरपालिका९१० भवानीकी २२ वर्षीया अस्मिता बोगटी घरेलु कामदारका रुपमा काठमाडौमा बस्थिन । करिब ५ वर्ष देखि काठमाडौमा बस्दै आएकी अस्मिताको प्रेम गाउँकै गणेश विक संग भएको खुलेको छ । उनले आफु विवाहित भएको र छोराछोरी पनि छन् भनेपछि उनीहरुबीच विवाद भएको थियो ।
घटनामा सं’ल’ग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले गुराँस गाउँपालिका(५ गोगनपानीका २१ वर्षीय गणेश विकलाई पक्राउ गरिएको छ ।
गएको भदौ १४ गते राति १० बजेतिर अस्मिताको मृत्यु भएको खुलेको छ । गणेश घटनामा सं’ल’ग्न भएको अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान थाल्दा अन्य कुरा खुलेका हुन् ।
अस्मिताको श व घटनाको भोलिपल्ट भदौ १५ गते बिहान बिउराखेत नजिक भैरीखोलामा भेटिएको थियो । त्यसबेला पहिचान नखुलेको कारण भदौ १९ गते पोष्टमार्टम गरी नारायण नगरपालिका–८ झुप्रेसाल जङ्गलमा प्रहरीले श व ब्यवस्थापन गरेको थियो ।
अस्मिताले काम गर्दै आएको घरबाट भदौ २८ गते दैलेखमा फोन गरे पछि उनी घरका लागि हिँडेको थाहा भएको थियो । आमा युवतीको आमा छोरी हराएको भन्दै दैलेख स्थित प्रहरी कार्यालयमा खोजीका लागि जाँदा प्रहरीले आफुहरुले श व ब्यवस्थापन गरिसकेको युवतीको फोटो देखाएका थिए ।
उनले फोटो हेरेर आफ्नो छोरी भएको बताएकी थिइन् । काठमाण्डौबाट दैलेख हिँडेकी अस्मिता घर नपुगेको थाहा पाएपछि प्रहरीले तर्ताङ्मा गा डे को श वको फोटोसँग दाज्दा उनको पहिचान खुलेको हो ।
अस्मिताको मोबाइलको नम्बरमार्फत कल डिटेल जाँच गर्दा गरिएको कल डिटेल्सको आधारमा गणेश विक नै घटनामा सं’ल’ग्न भएको खुलेको हो । प्रहरीले भदौ १४ गते अस्मिता र गणेशबीच १२ पटक कल भएको फेला पारेको थियो ।
← हिजोको त्यो क्षण: बुद्ध एयरको फोर्स ल्याण्डिङबारे क्याप्टेनसँग संवाद यसरी गरिएको थियो, दुरबिन लगाएर क्याप्टेनले… → पौडी खेल्ने क्रममा डु’बे’र बेपत्ता भएका किशोरको शव फेला